NgoMvulo, Septemba 23, 2013 NgoMvulo, Septemba 23, 2013 Douglas Karr
I-Justintime Prototyper ikuvumela ukuba wakhe i-web esebenzisana ne-rich, mobile kunye neefowuni zeefowuni. I-Justintime Prototyper yenza ukuba kudalwe iiprototypes ezisebenzisanayo ngezimbo zomzimba kunye neziphumo ezimangalisayo. Unokwenza prototype idatha eqhutywa ziidatha kunye nefom yokuqinisekiswa ngaphandle komgca omnye wekhowudi. Jonga imizekelo yePrototyper kwindawo yabo. Iimpawu ze-Justintime Prototyper: Iiprotocol zesicelo seSelfowuni-Yonwabela ukukhuphela ii -apps zakho zeselfowuni ngesixhobo esinamandla kodwa kulula ukusisebenzisa ukuyila izijekulo, utshintsho, iziphumo kunye